Waa'ee Gadaa wantoota beekuu qabdan shan - BBC News Afaan Oromoo
Madda suuraa, UGC
Abbaa Gadaa Kuraa Jaarsoo Kuraa, Makkalaa fi Bokkuu isaa waliin
Akkaataa waggaa dhalootaatiin gurmuu ykn murni ilmaan kormaa tartiibaan keessa dabran sadarkaa Gadaa jedhama. Sadarkaan Gadaa tokko waggaa saddeet qaba. Waggaa saddeet saddeettan kanaan Oromoo hamma gaafa dulloomee du'uutti hawaasa keessatti bakkaa fi qoodama dalagaa qabaata.
1. Gogeessa Gadaa
Gadaan gogeessa (garee) shan kan qabu yoo ta'u, isaanis shanan Gadaa Oromoo jedhamu. Gareewwan kun ganna saddeet saddeetiin aangoo wal harkaa fuudhu. Shanan Gadaa Oromoo kun bakka adda addaatti maqaa adda addaatiin beekkamu (gabatee ilaali).
Ilmi Oromoo kamiyyuu, guyyaa itti dhalatee eegalee gogeessa shanan Gadaa keessaa tokko keessatti haammatama. Duraan dursee kan inni hammatamu, shanan Gadaa keessaa miseensa isa gaafa inni dhalatu aangoorra jiruutiini. Kunis gogeessa abbaa isaa keessati jechuudha.
Dabballee fi Luba Guyyoo Gobbaa Ardaa jilaa Badhaasaatti
2. Baallii walharkaa fuuchuu
Gadaan waggaa saddeet saddetiin naanna'a. Abbaan Gadaa tokko waggaa saddeet irraa guyyaa tokkollee dabarsuu hin danda'u, aadmalee.
Dhaloonni oromoo sirna gadaatiin bulu yeroo hunda gadaa keeessa jira. Gulantaa irra jirurratti mirgaa fi dirqama aangoon gadaa kenneef hojiitti hiika namni hunduu. Baallii walharkaa fuuchuu jechuun egaa gulantaa sirna gadaa tokkorraa kan itti aanuutti ce'uu jechuudha. Haala Kanaan namni raaba doorii keessa ga'umsaan darbe gadaa ta'ee aangoo abbaa gadaarraa fudhata. Oromiyaa bakka garaa garaatti jilli gadaa fardaan ba'ee guyyaadhaan baallii walitti dabarsa. Boorna keessatti sirni kun halkan walakkaa raawwatama. Yeroo jilli gadaa fardeen torbaan baalli fuuchuuf ba'an nama dhiisii simbirruu dura darbuun aadmalee.
3. Ardaa jilaa
Ardaan Jilaa bakka itti walga'uun dhimmi ummataa mari'atamuudha. Iddoo kabajamaa jilli gadaa irra naanna'uun naannoo wayyoomsu ykn kabaja akka qabaatu hojjetu jechuudha. Ardaan Jilaa teessoo gadaatis. Dhimmi jilatamu kamiyyuu ardaa jilaatti raawwatama waan ta'eef. Oromiyaan Ardaalee Jilaa hedduu qabdi.
Odaan galma abbaa Gadaati. Oromiyaa keessa odaawwan hedduutu jiru. Kanneen giddu gala sirna gadaa ta'anii tajaajilaa turanii fi ammas tajaajilaa jiran garuu shan. Isaanis :
Odaa roobaa kan Godina Baaleetti argamu
Odaa bisil kan Shawaa Lixaatti argamu
Odaa nabee kan shawaa Bahaatti aragamu
Odaa Bultum kan Harargee Bahaatti argamu
Odaa Bulluqi Horo guduruu
Shamarranii fi Dhiirri Oromoo wayita Hora Harsadiitti irreeffatan
Irreessi duudhaa, amantii fi aadaa oromoo calaqqisiisa. Kaayyoon sirna Gadaa keessaa isa tokko oromoon kan ittiin uumaa fi uumamatti dhiyaatu, galateeffatuu fi kadhatu sirna Irreechaatiin.
Irreechi waggaatti si'a lama kabajama. Inni birraa wayita oromoon bacaqii gannaarraa gara booqaa birraatti ce'u kabajama. inni kun Irreecha Malkaa jedhama.Inni arfaasaammoo wayita roobni fuula as deebifatu rooba nagaa kadhachuuf kabajama.inni kunimmoo irreecha tulluu jedhama.